FIKAMBANANA 2 MT: Nitsinjo ireo sahirana. | déliremadagascar
FIKAMBANANA 2 MT: Nitsinjo ireo sahirana.
Socio-eco	 1 janvier 2018 R Nirina
Nanana vatsy niatrehana ny fetin’ny taombaovao ny mpikambana ao amin’ny “2MT” na “miara-mandroso no tanjona”. Nizara kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN) tena manahirana ny mponina ao Soavina ny fikambanana ny 30 desambra 2017. “Miara-miasa akaiky amin’ny kaominina Soavina Atsimondrano ny fikambanana ka anisany mpikambana ao anatin’ny “2MT” ireo mponina sahirana ao amin’ny kaominina. Izy ireo no nisitraka izao tombontsoa izao”, hoy ny Filoham-pitantanana ny fikambanana Barijaona ANDRIAMANISA.
Ny fanohanana avy amin’ny orinasa miisa enina no nahavitan’ny fikambanana nanao asa fanasoavana. Ankoatra ny fizarana PPN, notolorana mari-pankasitrahana ihany koa ireo mpikambana mendrika ara-pitondran-tena.
Mifantoka amin’ny sosialim-bahoaka ny andraikitra sahanin’ny fikambanana “miara-mandroso no tanjona”. Manoro hevitra sy miezaka mampianatra ny mpikambana hiohatra amin’ny fiainana. “Mikaroka ny fomba rehetra ahafahan’ny mpikambana sy ny mpiara-belona hampandroso ny fiainany izahay”.
Nandritra ny roa taona nijoroan’ny “2MT”, tsy tapaka nanao asa sosialy ho an’ny mpikambana sy fiarahamonina foana ny fikambanana.